Famakafakana ny iPad Pro 2021 vaovao: hatsarana feno | Vaovao IPhone
New iPad Pro 2021 Famerenana: Fahombiazana tsy feno
Ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny processeur M1 manambatra fiasa tsy manam-paharoa izay mahatonga azy ho takelaka "Pro" izay nandrasantsika hatry ny ela, ary iPadOS 15 ihany no ilainao raha hifanaraka.
Apple dia nametraka ny ambiny ao amin'ny fitaovan'ny iPad Pro 2021, indrindra amin'ny maodely izay nohalalininay amin'ity lahatsoratra ity, ny 12,9-inch. Ho an'ny mpikirakira M1 vaovao izay efa nampidirin'i Apple tao amin'ny solosainy ary nahomby tamin'ny fitsikerana sy ampahibemaso. mila manampy efijery miniLED mahafinaritra izahay izay manatsara ny traikefa multimedia amin'ny fitaovana. Ny fitomboan'ny fahatsiarovana RAM izay raisina an-tanan-droa hatrany, ary ny fanatsarana ny fifandraisana USB-C amin'ny Thunderbolt 3 dia mameno ny fiovana lehibe amin'ny takelaka Apple tsara indrindra, izay farany lasa mpifaninana mendrika an'i MacBooks, miandry izay entin'ny iPadOS 15 amintsika.
1 Efijery miniLED vaovao
2 Processor M1
3 Center Stage sy Thunderbolt 3
4 Kitendry Magic vaovao
5 Apple, tonga ny fotoana ho an'ny iPadOS
Efijery miniLED vaovao
Apple dia nantsoina hoe "Liquid Retina XDR." Efa fantatsika ny zavatra tian'izy ireo any Cupertino hametrahana anarana amin'ny "zavatra" azy ireo, fa raha misy zavatra mendrika hanana anarana sahaza dia mahagaga io tabilao io. Ny fitsambikinana momba ny sarin'ilay maodely teo aloha dia goavambe, ary tsy asa mora izany. Ny iPad Pro hatreto dia manana ny iray amin'ireo efijery tsara indrindra hitantsika teny an-tsena, saingy ankehitriny dia toa tsy dia misy dikany raha ampitahaintsika amin'ny maodely vaovao noho ny rafitra backlighting miniLED ampidiriny.
Raha tsy miditra amin'ny antsipiriany ara-teknika dia mamela faritra kely amin'ny efijery mila azy ny rafitra vaovao fa tsy toy ny mitranga amin'ny LCD nentim-paharazana izay tsy maintsy manazava tanteraka ny efijery. Io dia ahafahana mampisy fifanoherana ambony lavitra (1.000.000: 1) Izany no mahatonga ny mainty hoditra tena nigga Raha manampy an'ity famirapiratana hatramin'ny 1000 nits ity izahay rehefa milalao atiny HDR (miaraka amin'ny tampon'isa hatramin'ny 1600 nits) dia manana efijery iray ahafahanao mankafy atiny multimedia maro ianao satria vitsy ny fitaovana mamela anao.
Faly be tamin'ny fahita lavitra tao an-trano aho, niaraka tamin'ny iMac ary niaraka tamin'ny iPad Pro 2018… mandraka ankehitriny. Eny, efa fantatro hoe nanao ahoana ny fisian'ny efijery OLED teny an-tanako hatramin'ny nanombohana ny iPhone X, saingy miaraka amin'ny habe 12,9 "ny traikefa dia tsara lavitra kokoa. Raha ampiantsika amin'io ny feon'ny habakabaka amin'ny AirPods Pro sy AirPods Max mifandray amin'ny iPad Pro dia manaitra fotsiny ny valiny..
Mazava ho azy fa manan-danja ihany koa ny ambin'ireo fisehoan'ny efijery, fa ny maodely efa antitra dia efa nanana azy ireo; ProMotion, loko tena marina, zoro fahitana tsara… Lisitra lava be an'ny famaritana voafintina ao amin'ity efijery ity, izay, no mpandray anjara fototra amin'ity iPad vaovao ity. Mampalahelo fa tsy te hampiditra azy amin'ny maodely 11-inch i Apple, satria tsy misy an'io iPad Pro io dia very saina be.
Ny iPad Pro vaovao dia manana processeur mitovy amin'ny Mac. Ity fehezan-teny ity dia zavatra tsy noeritreretina taona vitsivitsy lasa izay, saingy androany dia efa misy ny zava-misy. Ary tsy misy mpikirakira fotsiny fa "The Processor". Mila mijery fotsiny izay voalaza momba an'ity M1 ity ianao hatramin'ny namelan'ny Apple azy. Ny fahombiazan'ny herinaratra sy angovo raha tsy mila mpankafy, izay ilain'ny iPad Pro fotsiny mba ahazoana ny fiakaran'ny kalitao izay nandrasantsika efa ela. Ny 16 cores amin'ity M1 (8 CPU sy 8 GPU) ity dia miantoka fa afaka manao karazana asa miaraka aminy ianao.
Mba hanampiana an'ity processeur mahafinaritra ity dia manana RAM 8GB (hatramin'ny 16GB RAM amin'ny maodely 1TB sy 2TB). Sambany i Apple no mamaritra ny RAM an'ny iray amin'ireo findainy. Miaraka amin'ireto fepetra voalaza ireto dia misy mieritreritra fa tsy misy fetra io iPad Pro io ... fa marina izany. Satria amin'ity iPad Pro 2021 sy iPadOS 14 ity dia afaka manao zavatra mitovy tanteraka amin'ny iPad Pro 2018 sy iPadOS 14 teo aloha ianao. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia ny zavatra sasany hanao azy io haingana kokoa. Ity dia tsara ho an'ireo izay manana iPad Pro 2018, saingy ratsy ny manamarina ny famindrana azy amin'ny iPad 2021.
Center Stage sy Thunderbolt 3
Misy zava-baovao roa tena ilaina ao amin'ity iPad Pro vaovao ity. Raha ny marimarina kokoa dia manan-danja ny iray, ary ny iray hafa tokony ho. Apple dia nanome anarana ny "Center Stage" ho fiasa mahaliana an'ny fakan-tsariny eo aloha izay mamela ny tavanao hifantoka hatrany amin'ny efijery, na dia mihetsika aza ianao. Ho an'ity dia manana rafitra zoro mivelatra izy ary mamela ny fakantsary "hihetsika" raha mihetsika eo alohany ianao. Miaraka amin'ny fironana amin'ny fampiharana ny kaonferansa misy ny video, izay toa nijanona raha vao tapitra ny areti-mifindra COVID tamin'ny farany, ity endri-javatra ity dia fanampiana tsara tokoa izay azo antoka fa hakana tahaka ny mpanamboatra hafa. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, tsy ny FaceTime ihany.
Ny mbola tsy nanaporofo ny maha-ilaina azy dia ny fifandraisana USB-C dia mifanaraka amin'ny Thunderbolt 3. Ny karazana mpampitohy ampiasainao dia mitovy, USB-C, noho izany dia hiasa hatrany ny kojakojanao, fa mahatratra ny taha ambony amin'ny fandefasana data, hatramin'ny 40Gbps, toy ny amin'ny Mac. Ahoana no ahitantsika izany? Raha manana ny kojakoja ilaina isika dia hamindra ireo rakitra lehibe amin'ny iPad haingana kokoa… ary dia izay. Hitanay indray ny tenantsika miaraka amin'ny bottleneck izay eritreretin'ny iPadOS amin'ny zavatra rehetra tsy avelany. Mampifandray fampisehoana 6K amin'ny iPad-nao? Azonao atao ... saingy tsy dia hahomby izany satria tsy misy ny fanohanana ireo mpanara-maso ivelany, sary 4: 3 fotsiny no ho hitanao eo amin'ny monitor-nao mahafinaritra.
Rindrambaiko vitsivitsy ihany no mamela ny fampiasana monitor ivelany, toy ny iMovie na LumaFusion, fa ny rafitra kosa dia tsy tohanana, tsy ho afaka hampifandray ny iPad-nao ianao ary hahita ny biraony haoriny amin'ny refin'ny efijery vaovao, mbola nofinofy izany. Ny fampiasana kojakoja mifandray dia voafetra ihany koa. Azonao atao, ohatra, ny mampifandray mikrô amin'ny Thunderbolt 3 amin'ny alàlan'ny tariby USB-C, fa aza manapa-kevitra hoe aiza no tianao hamoronana ilay feo avy amin'ny iPad anao. Ity izay zavatra fototra ao amin'ny macOS ity dia tsy azo atao amin'ny iPadOS.
Kitendry Magic vaovao
Apple dia nanangana miaraka amin'ny iPad Pro vaovao modely roa an'ny Magic Keyboard, amin'ny mainty sy fotsy. Tamin'ny fotoana namoahana io fanambarana io dia nisy tahotra mafy indrindra nahazo anay izay efa nanana Magic Keyboard, ary nipoitra ny tsy fitoviana amin'ilay maodely taloha niaraka tamin'ny iPad Pro vaovao. Soa ihany fa tsy izany no izy, ary ny keyboard Apple teo aloha dia mifanaraka tanteraka amin'ny iPad Pro vaovao, Mitovy amin'ny fonon-tànana izy io, tsy misy karazana asterisk na tsy mety.
Rehefa hitanao ny vidin'ity kitendry Apple ity dia mihodina avy hatrany ny masonao, saingy io no tena famenon'ny iPad Pro. Manana maodely hafa eny an-tsena tena tsara isika, toy ireo atolotry ny Logitech, mpanamboatra antoka. izay nanolotra ny kitendry tsara indrindra ho an'ny solosaina sy ny takelaka nandritra ny taona maro. Saingy tsy misy manakaiky ny Magic Keyboard. Raha tsy manahy momba ny fifandraisana Bluetooth na batterie izay tsy maintsy haverina simba ianao, ny fiorenan'ny zotram-panalahidiny, ary ilay trackpad maro-mahaliana izay Apple ihany no mahalala ny fomba tokony hatao ary nankafizinay tao amin'ny MacBook nandritra ny taona maro ny antony lehibe tokony hanaovanao izany. diniho ny fandoavana ny vidiny. Soa ihany fa mifanaraka ny kitendry taloha, satria ny maodely fotsy vaovao dia hatsaran-tarehy izay tsy isalasalako fa haharitra amin'ny fitsapana ny fotoana fa tsy ho afaka hanohitra ny fividianana aho.
Apple, tonga ny fotoana ho an'ny iPadOS
Mampalahelo fa misy "but" be dia be ity fanadihadiana ity. Ity iPad Pro ity dia fitaovana tena lehibe tokoa, mahazatra an'ny Apple izay tena idealy indrindra ananantsika. Tsy hahita takelaka matanjaka kokoa sy tsara tarehy ianao, na kalitao fananganana avo kokoa, na dia ilay manakaiky azy aza. Saingy tsy miankina amin'ny iPadOS ny asa, amin'izao fotoana izao. Ny fiovana nataon'i Apple tamin'ny rafitra fikirakirana iPad dia fanovana lehibe tokoa, saingy izao no fotoana hijanonana farany amin'ny iOS, ary ny iPad Pro dia manana ny rafitra fiasany izay mampiavaka azy amin'ny iPad sisa tavela izay ananan'i Apple. ny Katalaony.
Tsy misy dikany izany ampidiro ity processeur M1 ity, efijery miniLED, Thunderbolt 3 ary RAM 8GB mba hitovizany mitovy amin'ny iPad Air. Io lisitry ny famaritana asehon'i Apple antsika ao amin'ny tranonkalany io dia tokony hanisy fiovana, indray mandeha sy ho an'ny rehetra. Ny fitondrana macOS amin'ny iPad Pro dia tsy tafiditra ao amin'ny drafitr'i Apple, ary tsy olana izany. Fa tahaka ny ahafahantsika mihazakazaka fampiharana iPadOS amin'ny Mac, maninona isika no tsy afaka mampiasa fampiharana Mac amin'ny iPadOS? Manana ny fitaovana sy ny kojakoja izahay, mila Apple fotsiny izahay hampavitrika an'io bokotra io. Ny votoatin'ny iPad dia ny fanatsorana hatrany ny lahasa sy ny fifandraisana misy eo aminy, fa izao kosa manana kitendry, trackpad ary totozy izahay, manana fahefana hanao zava-mahatalanjona sy fifandraisana Thunderbolt 3 avo indrindra isika. Tonga izao ny fotoana ho an'ny iPad Pro ho tonga lafatra sy mahomby farany amin'ny MacBook, ary tsy maintsy vita printy na tsy misy asterisk. Fotoana izao hanomezan'ny iPadOS 15 antsika izay nangatahintsika hatry ny ela, satria mendrika an'io iPad Pro vaovao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » New iPad Pro 2021 Famerenana: Fahombiazana tsy feno
Apple Watch dia manitatra ny fanitarana ny tsenan'ny Smartwatch amin'ny Q2021 XNUMX
Netflix dia afaka nijoro tamin'ny Apple Arcade niaraka tamin'ny serivisy lalao video